15 Software -ka Wanaagsan Fiidiyowga Fiican ee Fiican Sanadka 2021 | Faallooyinka ugu Fiican
Bogga ugu weyn 15 Software -ka Wanaagsan Fiidiyowga Fiican ee Fiican Sanadka 2021 | Faallooyinka ugu Fiican
Waxaa laga yaabaa 27, 2021
Isha Sawirka: Pexels.com
Cilmi-baaristu waxay muujisay in wicitaannada fiidiyaha ay noqdeen dhinac-maalin-ka-wada-hadalka isgaarsiinta maanta iyadoo in ka badan 175% ay kordheen adeegsiga fiidiyowga tooska ah ee tooska ah ee millenniyadii saddexdii sano ee la soo dhaafay.
Kordhinta masiibada COVID-19 ee 2020 waxay dhalisay koror baahsan oo ku saabsan adeegsiga barnaamijyadan wada sheekaysiga fiidiyaha. Waxay u oggolaadaan isku-xirnaanta waqtiga-dhabta ah ee ka dhexeeya saaxiibbada, shaqaalaha, iyo qoyska. Waxoogaa software ah ayaa kaa caawin kara buundooyinka kala -goysyada halkaas oo is -dhexgalka jireed aan macquul ahayn.
Noocyada kala duwan ee barnaamijka wada sheekaysiga fiidiyaha ayaa bixiya qorshayaal bilaash ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaad la xiriiri karto dadka waqtiga dhabta ah gabi ahaanba adigoon bixin wax dime ah.
Markaad sii akhrinaysid, waxaad arki lahayd qaar ka mid ah software -ka wada sheekaysiga fiidiyaha ee bilaashka ah ee ugu fiican oo aad ka xulan karto, haddii ay tahay inaad sii waddo xiriirrada shaqsiyeed, aad shaqada ku sii jirto, ama qof walba la socodsiiso horumarkaaga ciyaaraha, iyadoo ku xiran sababta aad mid doonayso, waxaad awoodi doontaa inaad samayso doorasho wanaagsan.
Muxuu Sameeyaa Software Chat Video?
Software -ka sheekaysiga fiidiyaha ayaa maanta aad u badan. Waxaa loo adeegsadaa isgaarsiinta, hawlgelinta shaqaalaha fog, wada shaqeynta waaxyaha iyo goobaha, wareysiga musharrixiinta shaqada iyo maareeyaha alaab -qeybiyeyaasha. Kuwaas oo dhan waxaa la samayn karaa si ficil ahaan iyo waqtiga dhabta ah. Waxay hoos u dhigaysaa qiimaha iyo waqtiga lagu raro qofka meel ka mid ah meel kale si loogu qabto kulan.
Inta badan barnaamijyadan wada sheekaysiga fiidiyaha ah waxay leeyihiin astaamo awood u siinaya duubista inta wada sheekaysiga fiidiyowgu socdo. Tan, waxaad si fudud ugu laaban kartaa shirarkii hore si sahlan. Iyada oo ay sabab u tahay taabashada indhuhu ee dalwaddu, waxay ka dhigaysaa mid ka mashquul badan shirarka maqalka.
Waxay hagaajinaysaa iskaashiga ganacsiga iyo tababarka midho dhal leh. Waxay si weyn u wanaajisaa shirarka habaysan oo leh isgaarsiin la hagaajiyay. Daraasadu waxay kaloo tusaysaa inay wanaajiso wax soo saarka. Halkii aad u diri lahayd boostada oo aad sugi lahayd jawaabta, waxaad si fudud ula sheekaysan kartaa qofka oo aad u heli kartaa jawaabahaaga waqtiga dhabta ah.
Siday U Shaqeeyaan
Software -ka wada sheekaysiga fiidiyaha ayaa ah kuwa saaxiibtinimo leh oo sidaas oo kale ah, aad u fudud in la dhex maro oo la dejiyo. Marka hore, waa inaad ku rakibtaa softiweerka moobilkaaga ama desktop -kaaga. Badankood waxay u baahan yihiin inaad is -qorto. Ka dib markaad dhammeyso is -qoritaanka, wax kasta oo kale ayaa u fudud sida ay timaaddo. Si kastaba ha ahaatee waxay ku xiran tahay haddii aad tahay marti -geliye ama ka -qaybgale. Haddii aad tahay marti -geliye, softiweerrada qaarkood sida Zoom, waxaa lagaa rabaa inaad bilowdo kulanka, dirto xiriiriyeyaasha ama furayaasha sirta si aad ugu biirto kulanka. Haddii ay tahay qol kulan oo qufulan, sidoo kale adiga ayay kugu xiran tahay inaad u oggolaato kuwa aad rabto inay ku soo biiraan.
Haddii aad tahay ka -qaybgale, markii la soo diro xiriir, waxaad ku biiri kartaa tuubada. Barnaamijyada kale ee sheekaysiga fiidiyaha sida FaceTime, marka lagu soo waco, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa jawaabta oo way isku xirtaa. Interface -ka adeegsadaha ee software -kan ayaa ah mid sahlan in la raaco. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad fiiro gaar ah siiso si aad u fahanto shaqooyinka mid kasta.
15 ugu Fiican Software Chat Chat Video ee 2021
Zoom waa barnaamij softiweer taleefan iska lahaansho ah oo ay soo saartay Zoom Video Communications. Waxay leedahay qorshe bilaash ah kaas oo bixiya adeeg wada sheekaysiga fiidiyaha kaas oo u oggolaanaya ilaa 100 ka-qaybgale oo isku mar ah, oo leh xaddid waqti 40-daqiiqo ah.
Software -ka ayaa laga heli karaa Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS. Zoom wuxuu bixiyaa tayada maqalka iyo muuqaalka HD. Adiga iyo kooxdaada waxaad isla wadaagi kartaan shaashaddaada. Waxay bixisaa horumarin sida asalka dalwaddii, is -dhexgalka jadwalka iyo qol sugitaan oo ka soocaya barnaamijyada kale ee fiidiyaha fiidiyaha.
Zoom wuxuu isku keenaa kooxaha meel fiidyow sugan ah. Barnaamijka Wada sheekaysiga Fiidiyowga waa fududahay in la isticmaalo heer shaqsiyeed iyo mid xirfadeed labadaba. Waxa kale oo ay ka dhakhso badan tahay barnaamijyada kale ee fiidiyaha fiidiyaha. Waxaa si aad ah loogu qiimeeyay inuu yahay mid isticmaale saaxiibtinimo leh oo aad u is haysta maadaama ay aad u fudud tahay in la dejiyo. Kulamada waxaa lagu xafidaa sirta mana bilaabi karaan ilaa uu martida soo galo sheekada. Waxay u fiican tahay wicitaannada kooxaha waaweyn.
Ma jiraan dhibaatooyin la taaban karo marka la isticmaalayo zoom.
Haddii aad raadinayso softiweer fudud, la isku halleyn karo oo hal -abuurnimo u ah shirarka, sheekaysiga, codka iyo webinars -ka dhammaan aaladaha iyo meelaha bannaan, waa inaad fiirisaa Zoom
Si aad u hesho barnaamijkan sheekaysiga fiidiyaha, guji halkan
#2. Kulanka Google:
Kulanku waa barnaamij wada sheekaysiga fiidiyaha oo bilaash ah oo ay soo saartay Google. Waxaa markii hore la sii daayay 2017. Waxaa loo soo bandhigay in lagu beddelo Google Hangouts. Waxay ka shaqeysaa Android, iOS iyo shabakadda.
Google kulannada fiidiyaha ayaa lagu qariyey gaadiid-raac waxaana la diyaariyey tallaabooyin liddi ku ah ka-hortagga xadgudubka si loo ilaaliyo shirarkaaga. Waxay bixisaa qorshe bilaash ah oo cajiib ah. Waxaad yeelan kartaa shirar saacado aan xadidneyn oo leh ilaa 100 kaqeybgale. Qorshaha xorta ah waxaa kaloo ka mid ah xaqiijinta 2-tallaabo iyo diiwaangelinta barnaamijka ilaalinta sare.
On Meet, waxaad si sahal ah u arki kartaa dhammaan shirarkaaga jadwalka ah ee maalinta oo aad ku biiri kartaa kulanka adiga oo taabanaya. Waxaa sidoo kale jira shuruud loogu talagalay lambarka taleefanka garaaca ee kulan kasta, sidaa darteed marti kasta wuxuu leeyahay waayo-aragnimo weyn xitaa marka la socdo WIFI ama xog la'aan.
Haddii aad isticmaaleyso Chrome, Safari, Firefox ama Edge cusub, uma baahnid in la rakibo plugins ama software. Waxaad si raaxo leh u isticmaali kartaa Kulan oo ku biiri kartaa kulanka biraawsarka. Waxay u fiican tahay wicitaannada kooxda ee laga yaabo inay sii dheeraadaan
Waxaa lagu qiimeeyay inuu yahay barnaamijka teleconference -ka ugu fiican. Waxaa jiray in ka badan 1.55 bilyan oo isticmaaleyaasha skype dhammaadka 2019. Waxay ku takhasustay bixinta wada sheekaysiga fiidiyaha iyo wicitaannada codka ee u dhexeeya kombiyuutarada, kiniiniyada, aaladaha gacanta, qalabka loo yaqaan 'Xbox One console', iyo saacadaha smart -ka ee internetka. Waxa kale oo ay bixisaa adeegyo fariin degdeg ah. Waxaa laga heli karaa nidaamyada hawlgalka kala duwan sida daaqadaha, macOS, Linux, Android, iOS, HoloLens iyo Xbox One. Waxa kale oo lagu heli karaa ilaa 108 luqadood.
#4. Ka gaabiya:
Waxaa soo saaray shirkadda software -ka Maraykanka ee Slack Technologies. Waxay leedahay astaamo saaxiibtinimo leh, qolal wada sheekeysi joogto ah (kanaal) oo ay abaabuleen mowduuc, kooxo gaar ah, iyo farriin toos ah. Software -ka ayaa laga heli karaa macruufka, Android, Windows, macOS iyo Linux (Beta). Waxay bixisaa barxad sugan oo si fudud u miisaami karta isgaarsiinta ganacsiga
Waxaa inta badan adeegsada kooxaha doonaya inay hagaajiyaan barnaamijyadooda isgaarsiinta guud.
#5. Google Duo:
Labada qof ayaa ah barnaamij moobiil oo lagu sheekaysto fiidiyaha oo la sii daayay 2016. Waxay gaartay in ka badan 1billion oo la soo dejisto marka laga reebo tirada aaladaha Android ee horay loogu rakibay. Waxaa lagu rakibay inta badan taleefannada Android. Way fududahay in la isticmaalo oo waxay bixisaa toobiye dhakhso leh oo loogu yeerayo aaladaha Google Home ee la dhisay.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka qaadato sheekaysiga meel kasta waxayna sii hayn doontaa socodka xitaa haddii shabakaddu isbedbeddesho. Gabi ahaanba waa mid ku saleysan mobilada oo sidaas oo kale, astaamihiisu waa aasaasi. Way ka sii badan tahay macaamiisha marka loo eego inta badan barnaamijyada kale ee fiidiyowga lagu sheekeysto maxaa yeelay waxay leedahay astaamo sida saamaynta iyo emojis. Wicitaanada Google Duo waa dhammaadka ilaa dhammaadka qarsoon.
Waxaa ugu fiican wicitaano kooban oo lala yeesho qof kale
Viber waa app wicitaan iyo fariin oo isku xira dadka meel kasta oo ay joogaan iyo meesha ay ka yimaadeen. Dhammaan wicitaanada Viber waxaa lagu ilaaliyaa iyada oo lagu dhisay qarsoodi dhammaad-ilaa-dhammaad, si aad u hubiso in wada-hadalladaadu had iyo jeer aamin yihiin.
Waxaa la bilaabay 2013 shirkadda internetka ee Shiinaha ee Tencent. Waxaa loo arkaa inay isku jiraan WhatsApp, Google iyo Apple Pay hal software. Waxaad ku samayn kartaa wax badan, oo ay ku jiraan bixinta biilasha, wacida tagsiga, akhrinta buugaagta, sameynta meheradaha iyo la wadaagista xusuusta asxaabta.
Tilmaamaha ugu sarreeya si kastaba ha ahaatee waxaa ka mid ah farriinta qoraalka, fiidiyowga iyo wicitaanka codka, farriinta kooxda, iyo wicitaanka. Haddii aad raadineyso software -ka sheekaysiga fiidiyaha oo bixiya xulashooyin kala duwan, waa inaad hubisaa WeChat.
Badeecaddii ugu horreysay waxaa iibsaday Steve Jobs sannadkii 2010. Waxay ku shaqaysaa iyada oo la aasaasay xiriir ka dhexeeya laba iPhones.
Waxaa inta badan adeegsada dadka isticmaala iPhone oo raadinaya wada hadal kooban.
Waxay bixisaa hab degdeg ah, fudud oo la isku halleyn karo si loola hadlo qof kasta oo adduunka ah. Waxaa adeegsada in ka badan 1.5 bilyan oo qof dhammaan 180 dal. Waxay la timaadaa waxyaabo badan oo cajiib ah. Waxa kale oo ay bixisaa sir-dhammaad ilaa dhammaad si dhammaan macluumaadka la wadaago inta lagu jiro wada-hadalladu ay ahaadaan kuwo sugan.
Waxay u fiican tahay kooxaha doonaya inay ku xirmaan dadka dibadda.
Barnaamijkan wada sheekaysiga fiidiyaha ee bilaashka ah ayaa si weyn loogu talinayaa ciyaartooyda. Waxaa loo dhisay in loogu sii gudbiyo ciyaaraha kooxo yar -yar oo dad ah, shirkadduna waxay dhowaan kordhisay adeeggeeda adeegga tooska ah ee Go Live oo laga bilaabo 10 illaa 50 qof. Waxaa la abuuray iyada oo ujeedadu tahay u oggolaanshaha ciyaartooyda inay helaan bulsho leh dad kale oo jecel inay ciyaaraan ciyaaraha fiidiyaha. Si kastaba ha ahaatee waxaa loo isticmaali karaa ujeeddooyin kale oo isgaarsiineed.
Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo marka la raadinayo qalab u adeegaya sheekaysiga shaqsiyeed iyo ganacsi.
#11. Facebook Messenger:
Sannadkii 2015, wicitaanka fiidiyaha ayaa lagu soo bandhigay Facebook Messenger
Waxaa inta badan loo adeegsadaa heer aan rasmi ahayn, oo si dhakhso ah u dhex maraya sheekaysiga qoraalka iyo farriimaha fiidiyaha.
#12. Kooxaha Microsoft:
Kooxaha Microsoft waa goob shaqo oo ku salaysan wada sheekeysiga xafiiska 365. Waxay leedahay qalab gaar ah oo lagama maarmaan u ah kooxaha si ay u wada shaqeeyaan si ay wax badan u gaaraan. Kooxaha Microsoft waxay isku daraan fariimaha deg dega ah, wicitaanada fiidiyaha, iyo wada shaqaynta dokumeentiga oo ku jira goob mideysan.
Waxaad la wadaagi kartaa shaashaddaada markaad shirka ku jirto. Waxa kale oo aad ka tegi kartaa wada sheekaysiga ilaa wicitaanka fiidiyaha ee softiweerka adiga oo taabanaya badhan kaliya. Astaamaha ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad duubto wicitaanka si ka -qaybgalayaasha kale ay u heli karaan wax kasta oo la sheego.
Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad ka qeyb gasho kulamada ilaa 300 ka -qeybgale ilaa 24 saacadood markiiba. Waxaa ugu fiican iskaashiga mashaariicda waaweyn laakiin gaarka ah.
WebEx waxay bixisaa nooc bilaash ah oo xadidan oo kuu saamaxaya inaad mid mid ula kulanto xadka 50 daqiiqo. Waxay ku habboon tahay kuwa u adeegsada shaqada iskood u shaqeysta. Markaad isticmaaleyso, waxaad ku wadaagi kartaa shaashaddaada aaladdaada sidoo kale waxaad keydin kartaa duubista wicitaanka. WebEx waxay dammaanad qaadaysaa u hoggaansanaanta HIPAA/BAA iyo qarsoodi dhammaad-ilaa-dhammaad. Markaad martigeliso kulan, waxaad sidoo kale gelin kartaa furaha sirta ah si aad u xirto qolalka kulanka una hubiso asturnaanta kulamada.
Waxaa ugu fiican iskaashiga qof qof kale
Barnaamijkan wada sheekaysiga fiidiyaha ee bilaashka ah ayaa laga bilaabay 2012 TechCrunch Carqaladeeyay waxaana loo doortay inuu yahay badeecadda cusub ee ugu wanaagsan 30 qof oo soo galay. Waxay leedahay laba qorshe oo aad ka dooran karto. Mid waa lacag la'aan waxayna u oggolaanaysaa shirarka ilaa 10 ka -qaybgale oo biinanka loo baahan yahay.
Waxay siisaa ballaarinta astaamaha isticmaaleyaasheeda. Waxaad macno ahaan uga faa'iidaysan kartaa shirarka aan xadidnayn, oo soconaya ilaa 45 daqiiqo. Inta aad ku jirto wada sheekaysiga fiidiyaha, waxaad duubi kartaa wicitaannada inta shirku socdo. Waxay leedahay nabadgelyo dheeri ah oo ballanqaadaysa inay ilaalinayso wicitaannada fiidiyaha. Waxaad sidoo kale xiri kartaa shirkiina si aad u hubiso inaysan dhinacyo aan la rabin ku biirin inta lagu guda jiro kulanka.
Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee barnaamijka wada sheekaysiga fiidiyaha UberConference waa in ay meesha ka saartay adeegsiga biinanka, taas oo u sahlaysa dadka inay ku biiraan kulan. Waxay leedahay xakameyn wicitaan oo awood leh oo cad, wadaagga shaashadda aan kala go 'lahayn, iyo wicitaannada HD. Waxa kale oo ay bixisaa adeeg wanaagsan iyada oo aan wax faragelin ah lagu samayn.
Haddii aad raadinayso softiweer wada sheekaysiga fiidiyaha ah oo aad u fudud adiga iyo kooxdaada, waa inaad gabi ahaanba fiirisaa UberConference. Waxay u fiican tahay kooxaha maal galiyay falanqaynta.
Waxay u oggolaaneysaa illaa siddeed qof inay ku sheekaystaan ​​fiidiyaha 'qol'. Waxaa loo suuq galiyaa shabakad bulsho laakiin sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa ujeeddooyin ganacsi.
Waxay u fiican tahay kooxaha leh ujeedada ah inay fuliyaan hawlaha isku xidhka.
Barnaamijyo badan oo wada sheekaysiga fiidiyaha ah ayaa bixiya waxqabad dheeraad ah oo ka baxsan wada sheekaysiga fiidiyaha sida bixinta wadaagista faylka, ikhtiyaarka wicitaanka maqalka fudud oo aan lahayn fiidyoow, fuulitaanka cad iyo aaladaha wadaagga shaashadda, iyo qalabka duubista wicitaanka.
Mid ka mid ah arrimaha software -ka wada sheekaysiga fiidiyaha ee bilaashka ah uu la kulmi karo kaas oo ay tahay inaad tixgeliso waa tayada fiidiyowga kulan kasta. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay ku xiran tahay internetka iyo xawaaraha xogtaada. Waa lama huraan inaad hubiso inaad haysato internet xasilloon marka aad isticmaaleyso software -ka sheekaysiga fiidiyaha si looga hortago jahwareerka.
Wicitaanada fiidiyaha waxay bixiyaan taabasho shaqsiyeed oo ka badan taleefoonka caadiga ah. Aad bay muhiim u tahay inaad doorato softiweerka wada sheekaysiga fiidiyaha kaas oo ku siin doona khibrad qumman.
15 Software -ka Wada -hadalka Tooska ah ee Bilaashka ah 2021 | Ka qayb geli Macaamiishaada
10 -ka Ciyaaryahan Fiidiyowga Ugu Fiican Sanadka 2021
20 -ka Barnaamij ee ugu Wanaagsan Si Looga dhigo Wicitaannada Caalamiga ah Bilaash 2021
15 Qalabka Waxsoosaarka ee Shaqaalaha Fog ee 2021-2022
16ka Madal ee Adeegyada Taageerada Macmiilka ee ugu sarreeya 2021
15 Qalab Wadashaqaynta Kooxda Xorta ah ee 2021 | Helitaanka waqtiga dhabta ah
Sida Loo Ogaado Naftaada: 15 Hacks Fudud
Daqiiqad 14 akhri
Dib -u -eegista Dukaameeyaha Instacart 2022: Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad | Sir Aanad Ogayn
Ma doonaysaa in aad lacag ka samayso hawsha aad aadka u jeceshahay – wax iibsiga? Markaa, noqo…
21 Barnaamijyada Fiidiyowga ugu Fiican ee Dadka Waaweyn iyo Carruurta 2021 -ka
Ma jeceshahay daawashada filimada? Kaliya ku rakib barnaamijyada filimada bilaashka ah ee taleefankaaga oo lagu bogaadiyay isku xirka internetka, waxaad la yaabi doontaa…
Dib -u -eegista Freelancer.com 2022: Ma Sameyn Karaa Mise Waa Fadeexad?
Haddi aan samayno liiska goobaha madax banaanida ugu sareeya aduunka, Freelancer.com waxa ay ka mid noqon doontaa…
Geedka Qoyska Rockefeller: Sida hantida qoyska loo qaybsaday
Mid ka mid ah qoysaska caanka ah ee Maraykanka oo dhaxalkoodu uu soo jiray muddo dheer ayaa ah…
7 Siyaabood Oo Sharci Ah Sida Loo Helo Bitcoins Bilaash 2021 | Gebi ahaanba Bilaash
Ku helista bitcoins iyada oo loo marayo habab xalaal ah oo bilaash ah maanta iyo waqtigan waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag…
Faa'iidooyinka iyo Qasaaraha Warbaahinta Bulshada Sanadka 2022 | Talada Ugu Fiican
Baraha bulshada ayaa noqday aalad qiimo badan oo lagu faafiyo xogta dadweynaha. Sidaa darteed, faa'iidooyinkeeda…
Waa maxay Bonds Maal-gashi? Dulmar, iyo Siday u Shaqeeyaan?